Falanqaynta Twitter-kaaga Soo Socda | Martech Zone
Talaado, Disembar 27, 2011 Talaado, Disembar 27, 2011 Douglas Karr
Schmap ayaa sii daayay a Falanqaynta bogga Twitter qalab aad u dhameystiran. Adiga oo samaynaya isbarbardhigga isbarbardhiga ah ee kuwa raacsan xisaabaadka kale, Schmap wuxuu ku siin karaa falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan halka ay ka yimaadeen kuwa raacsan, xirfadaha ay yihiin, tirakoobkooda iyo xitaa saameyntooda. Waxaa jira falanqeyn aasaasi ah oo bilaash ah iyo sidoo kale a falanqayn buuxda. Qiimeynta falanqaynta waxay kuxirantahay nooca koontada aad falanqeyneyso laakiin waxay udhaxaysaa qiyaastii $ 25 macaamil aan ganacsi aheyn ilaa $ 125 shirkadaha.
About Schmap: Schmap waa adeeg bixiye teknolojiyad goob iyo daabacaad maxalli ah, oo leh qibrad goos goos ah isgoyska deegaanka, bulshada, ganacsiga iyo websaydhka waqtiga-dhabta ah. Waxaa si fiican noogu caan baxay hagayaashayada waqtiga dhabta ah ee magaalada, iyo adeeggayaga caanka ah ee Twitter.
Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada la wadaago ee falanqaynta buuxda loogu talagalay @douglaskarr (oo dhowaan dhaafey 30,000 oo raacsan!).
By Saamaynta Twitter
By Waxqabadka Twitter
Ilaa intee ayey ku jireen Twitter
Noocyada Xisaabaadka Twitter-ka ay raacaan
Waxaa sidoo kale jiray stats dheeraad ah sidoo kale, iyo falanqeyn faahfaahsan ayaa loo soo dejisan karaa CSV ahaan. Haddii aad rabto inaad hubiso inaad soo jiidanayso dhagaystayaasha saxda ah, waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad iibsato falanqayn buuxda. Xogta ka soo baxday ee aan helay waxay xaqiijisay istiraatiijiyadeyda soo jiidashada taageerayaasha Twitter waana ku faraxsanahay natiijooyinka. Meesha kaliya ee aniga walaaca igu haysay waxay ahayd inaan hoos udhaho liiska dumarka raacsan. Waxaa laga yaabaa inay tahay socodka joogtada ah ee sheekada geek… hubaal shaqooyin in la qabto ah.
Tags: jeexjeexschmap.itTwitterfalanqaynta twittertirada dadka ee twitterfalanqaynta raacayaasha twittertaageerayaasha twitter